Google manangona vola $ 40 tapitrisa amin'ny fizarana smartwatch an'ny Fossil | Androidsis
Raha ny zava-misy tokoa hatramin'ny nandraisan'ny Android Wear, Wear OS ankehitriny, ny tsena, toa tsy dia nandinika tsara ny rafitra fiasan'ny famantaranandrony ireo ry zalahy avy any Mountain View. Ary koa, tao anatin'ny roa taona lasa, ny orinasa dia tsy nanao hetsika hanondroana ny fahalianany hitandrina azy io.
Farafaharatsiny mandraka ankehitriny. Ny goavam-pikarohana sy ny mpanamboatra famantaranandro marani-tsaina, hybrida ary Fosil mahazatra, dia nahavita fifanarahana tany Google dia mahazo ny teknolojia smartwatchTeknolojia izay mbola tsy voafaritra ary eo an-dàlam-pandrosoana.
Miaraka amin'ny fahazoana ampahany amin'ny fananana ara-tsaina an'ny Fossil, Google koa dia mahazo ampahany amin'ny ekipa Fossil Research and Development. Hatao ara-dalàna ny fividianana amin'ny faran'ity volana ity.
Tsy nisy antsipiriany manokana nomena momba ny natioran'ity haitao ity. izay amin'ny teôria dia mbola eo an-dàlam-pandrosoana. Afaka mamaky isika ao amin'ilay fanambarana nalefan'i Fossil tamin'ny media:
Nanangana teknolojia mandroso sy mandroso izahay izay afaka manatsara ny sehatra smartwatch ankehitriny. Miaraka amin'i Google, mpiara-miombon'antoka amin'ny fanavaozana, dia hanohy hiara-hiasa amin'ny fitomboan'ny lamba azo entina izahay.
Fossil Group dia manana fahazoan-dàlana ho an'ny marika famantaranandro lamaody maro ao anatin'izany Misfit, Skagen, Armani, Michael Kors, Marc Jacobs, Kate Spade plus Fossil tenany. Ny orinasa dia nanambola fotoana sy vola betsaka amin'ny teknolojia Wear OS an'ny Google manerana ny tsipika vokatra marani-tsaina manontolo, ka tsy mahagaga raha miara-miasa akaiky amin'i Google izy io.
Tao anatin'ny roa taona lasa, ny mpanamboatra tokana izay tena nifandray tamin'ny Google dia ny Fossil. Isaky ny nambara fa misy fanavaozana vaovao ho an'ny Android Wear, ny Fossil no mpanamboatra voalohany namoaka ny fanavaozana mifanaraka amin'izany, fanavaozana izay tonga iray na roa andro taty aoriana. Ary milaza izany avy amin'ny zavatra niainako aho, satria mampiasa smartwatch marika Fossil isan'andro aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google manangona vola $ 40 tapitrisa amin'ny fizarana smartwatch an'ny Fossil
Ny Galaxy Note 9 sy Galaxy S9 + dia navaozina amin'ny Android 9 Pie any Espana